यस्ता छन् मन्दिरमा नरिवल फुटाउनुको रोचक कारणहरु, जानी राखौ
अगस्ट 17, 2019 अगस्ट 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment नरिवल, मन्दिर
मन्दिरमा धेरै चडाइने वस्तुहरु मध्येमा सबैभन्दा बढी नरिवल प्रयोग गरिन्छ । नरिवललाई संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ । श्रीफला पनि भनिन्छ नरिवललाई जसको अर्थ हुन्छ ‘शुभ फल उत्पति कसरी भयो ? वैदिक कथाहरुमा यसको उत्पतिको बारेमा राम्रोसंग उल्लेख गरेको पाइदैन । तर पुराण अनि महाकाव्यहरुमा भने यसको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो फल इन्डोनेशियामा पाइन्थ्यो अनि पहिलो शताब्दी पछिको समयमा उत्तरी एशियातिर भित्र्याइएको जनाइन्छ ।
नरिवललाई धेरै जस्तो शुभ कार्यको अगाडी प्रयोग गरिन्छ । तोरण झै घरको ढोकामा कुनै शुभकार्य पुर्व नरिवल फोडिन्छ । नरिवललाई उर्वरताको प्रतिक मानिन्छ । त्यसैले धार्मिक विश्वास अनुसार, यदि कोही स्त्रीलाई सन्तानको इच्छा भएमा नरिवलको रुख रोपेमा सन्तान प्राप्ति हुनेछ । नरिवललाई विवाह, कुनै चाडपर्व, नयाँ सवारी साधनको प्रयोग गर्दा, बाटो तथा पुल निर्माण गर्दा, घरको जग हाल्दा आदी कार्यमा पनि प्रयोग गरिन्छ । कुनै कार्यको शुभारम्भ पुर्व नै सबै काम राम्रोसंग होस् भनी नरिवल प्रयोग गरिने धार्मिक मान्यता छ ।
पानीले भरिएको जगको माथी नरिवल र आँपको पात राखेर महत्वपुर्ण कार्य अगाडी वा कोहीलाई स्वागत गर्दा नरिवलको पुजा गरिन्छ । नरिवललाई दुई टुक्रा बनाइ भगवानलाई चढाइन्छ र पछि प्रसादको रुपमा बाँडिन्छ । नरिवलको रुखलाई पनि फल जतिकै शुभ मानिन्छ । चलिआएको विश्वास अनुसार नरिवलको रुख विनाश गर्नेको पनि विनाश हुने बताइन्छ ।
← ज्योतिषशास्त्र अनुसार यस्ता मानिसले सुन लगाउनै हुदैन
रोग र भोक हटाउन कुन समयमा कति खाना खाने ? →
नोभेम्बर 22, 2017 नोभेम्बर 22, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “मन्दिरमा नरिवल फुटाउनुको रोचक कारणहरु”